အောင်ဆန်း (သို့) အရိုင်း | PoemsCorner
အောင်ဆန်း (သို့) အရိုင်း
ချစ်ရတဲ့ နာစ့်မလေးကြည်ကို လူဋ္ဌားနဲ့ ပိုးပန်းခဲ့ ရသူ၊
ဗွီအိုင်ပီ ဆိုတဲ့ စာတန်းကို အလွန် စက်ဆုပ် ရွံရှာသူ၊
လမ်းဘေးမှာ ကျောက်ကျောရေသောက်တဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်၊
မင်္ဂလာဆောင်မှာ ခဲဖိုးတောင်းတာ နားမလည် တဲ့သူ၊
လွတ်လပ်ရေးကို စဉ်းစားရင်း စစ်ဖိနပ် ပြောင်းပြန်စီး တဲ့သူ၊
လွတ်မြောက်ရေးကို စဉ်းစားရင်း ဆံပင်ညှပ် မပြီးခင် ထထွက် သွားတဲ့သူ၊
တွေ့ချင်လွန်းလို့ လမ်းမှာတားတဲ့ ရွာသားတွေနဲ့ အတူ
လမ်းဘေးမှာ အကြော်စားတဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်၊
သူ့ကိုယ်သူ ပြည်သူတယောက် အဖြစ်ခံယူတဲ့ ၀န်ကြီးချုပ်၊
“ ကြည်…ပဲပြုတ်နဲ့ နံပြားရရင် စားချင်တယ် ” လို့
ဇနီးသည်ကို မနက်စာပြင်ခိုင်းတဲ့ သူ့ရဲ့
သာမန်ရဲဘော် အဆင့်ရဲ့ အမှန်ကို
ခံစားဖို့ အချိန်မရခဲ့တဲ့သူ… သူ …သူ။
လွတ်လပ်ရေး လမ်းဝမှာ ဘွားကနဲ မြင်လိုက်ရရုံပဲ၊ အောင်ဆန်းရဲ့ဆရာတွေ မှိုင်း၊ မြ၊ ချိုတို့က အစ၊ “”ငါတို့ အားကိုးပါရစေ”” ဆိုလာကြ၊ ရှေးဘိုးဘွား မိဘပြည်သူတွေက “”ငါတို့ကယ်မယ့် မင်းလောင်းပေါ်ပြီ”” ပြုံးပျော်ကြ၊ လူငယ် သွေးသောက်မြန်မာတွေက “”ငါတို့ စွန့်ပါရစေ”” ဆိုပြီး ရှေ့ထွက်လာကြ၊ စုကြ၊ ရုံးကြ၊ စည်းလုံးကြ၊ တကယ့်ဗမာတွေ မဟာ အောင်ဆန်း အနောက်က ပြည်သူ့ ဒီလှိုင်းလုံးကြီး တွေရဲ့ တ၀ုန်းဝုန်း ရိုက်ခတ်သံဟာ အဲဒီအချိန်က ၀ိတိုရိယ ဘုရင်မကြီးကိုတောင် အိပ်မက်တွေ အေးခဲစေခဲ့ …. သပေါ့။
အောင်ဆန်းမှာ တပြည်လုံး ရှိတယ် …. ရှိတယ်…. ရှိတယ်။
ဒီ မျက်လုံး နှလုံးအသက်
အားလုံး အရည်ပျော် သွားခဲ့ကြ။
In: ကဗျာ Posted By: war10ck Date: May 28, 2013
ကဗျာ ဆိုတာ ( အောင်ဆန်း စုကြည်)
လှေကား – ဒီရေလှိုင်း
ရင်ခွင်ရိုင်း – မောင်စိန်ဝင်း (ပုတီးကုန်း)
မာယာမာနမြှုံးအောက်က တစ်စုံတစ်ယောက်အတွက် – ဒီရေလှိုင်း
Leave comment 1 Comment & 205 views
By: shinelalin at May 28, 2013